Yakanakisa Manipulator Ine Clamp Mugadziri uye Fekitori |Tongli
Manipulator ane clamp
a) Iro simba rimwe chete rakaoma ruoko rinobatsira manipulator rinogona kuenzanisa uremu hwakasiyana kubva pa2 kusvika 500kg.
b) Iyo magetsi-inobatsira manipulator inoumbwa neyakaringana mugadziri, chibatiso chekubata, uye yekumisikidza chimiro.
c) Iyo manipulator host ndiyo mudziyo mukuru unoona iyo isiri-giravhiti inoyangarara mamiriro ezvinhu (kana maworkpiece) mumhepo.
d) Iyo manipulator ndiyo mudziyo unoona kubata kwechishandiso uye unopedzisa zvinoenderana nekubata uye kuungana zvinodiwa zvemushandisi.
e) Iyo yekumisikidza dhizaini inotsigira iyo yese seti yemidziyo zvinoenderana nemushandisi sevhisi nzvimbo uye saiti mamiriro.
a) Inogona kuona iyo gravitational chiyero mamiriro ezvakasiyana huremu zvinhu, izvo zvakakodzera kune chaiyo kutamisa kushanda kwezvinhu.
b) Kana pasina mutoro, mutoro uzere uye akasiyana maworkpiece akagadziridzwa, sisitimu inogona kuona kushanduka kwehuremu uye kuona mamiriro ekuyangarara emutoro munzvimbo ine mativi matatu, iri nyore kune chaiyo chinzvimbo.
c) Hunhu hwechiyero chakazara, kufamba kwakatsetseka, nezvimwewo, inogonesa mushandisi kuita nyore kubata, kumisa uye kusangana kweiyo workpiece.
d) Ruoko rwakasimba runogona kuita kuti manipulator atakure workpiece pamusoro pezvipingamupinyi;ruoko rwakachinjika runogona kusangana nezvinodiwa zvekuisa yakachinjika uye yakachinjika kubviswa kwezvinhu munzvimbo dzakakodzera.
e) Iyo sisitimu inogona kugara yakachengetedza mwero wemusoro wemugadziri uye kuita yakakwirira kushanda.
f) Joint brake mudziyo, ine akawanda anotenderera majoini kuona kunhonga zvinhu uye kuiswa munzvimbo yakakura;akashongedzerwa nechigadzirwa chebhureki, mushandisi anogona kukanganisa kufamba kwemugadziri chero nguva panguva yekushanda.
Iyi mhando yemagetsi manipulator inogona kuwana kusimudza kusvika ku500Kg yebasa rekushanda.Radhiyasi yekushanda ingangoita 2500mm, uye kureba kwekusimudza kunosvika 1500mm.Zvinoenderana nekusimudza workpiece huremu hwakasiyana, inofanirwa kusarudza idiki mhando yemuchina inoenderana nehuremu hwepamusoro hweiyo workpiece, kana tikashandisa iyo yakanyanya kuremerwa ye200Kg yemanipulator kutakura 30Kg yeworkpiece, ipapo mashandiro eoperation zvirokwazvo haana. zvakanaka, inzwa kuremerwa.Midziyo yacho yakajairwa ine tangi yekuchengetedza mweya, iyo inogona kuramba ichipedzisa kutenderera kwekuita kana gasi rakagurwa.Panguva imwecheteyo, ichaita alarm yekuyeuchidza mushandisi.Kana mhepo yemhepo inodonha kune imwe nhanho, inotanga iyo yekuzvivharira basa kudzivirira kuderera kweiyo workpiece.Manipulator ine chengetedzo system, mukubata kwekubata kana workpiece haina kuiswa munzvimbo yakachengeteka, mushandisi haagone kuburitsa workpiece.Iine akasiyana-siyana asiri akajairwa gadziriso, yakaoma ruoko rudzi simba manipulator inogona nyore kupedzisa akasiyana maitiro ekuita.
Zvakapfuura: Manipulator Ane Mhepo Shaft
Zvinotevera: Manipulator Aine Suction Cup